China 20w fast charge portble power adapter ho an'ny mpanamboatra sy mpamatsy iphone |Wellink
20w fast charge portble power adapter ho an'ny iphone
Modely: OS- CD20w
Famandrihana haingana be 20w, mifanaraka amin'ny rafitra iOS sy Android.Fitaovana tsy misy afo.Habe kely ary azo aforitra.3A fast charge 1 ora hamenoana tanteraka ny iphone12, amboary ny batterie ary arovy ny telefaona.Mahafantatra tsara sy mamoaka ny ankehitriny mety indrindra.
Type-C Output: 5V/3A, 9V/2.25A MAX
PC fanoherana ny afo kilasy 94V0 akorandriaka / aluminium firaka akora (1 avy amin'ny 2)
20W PD 3.0 Quick Charger: GeydrQ 20W Type C FAST Wall Charger miaraka amin'ny 6FT MFi Certified C to Lightning Cord dia manome haingam-pandeha haingana kokoa ho an'ny iphone 12 anao, mamaly ny iPhone 12 hatramin'ny 50% ao anatin'ny 30 minitra, izay mitahiry bebe kokoa. mihoatra ny adiny 1 ho anao raha ampitahaina amin'ny charger voalohany 5W nefa tsy mampihena ny fahasalaman'ny batteran'ny iPhone-nao.
Fifanarahana midadasika: MFi voamarina USB C amin'ny tariby Lightning miaraka amin'ny 20W USB C FAST Wall Plug mba hidirana amin'ny fiampangana haingana ho an'ny iPhone 12/12 Mini/12 Pro/12 Pro Max/SE 2020/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X 8 Plus, iPad Pro, AirPods Pro.Ity charger 20W Power Delivery 3.0 FAST ity dia mandoa ho an'ny iPhone 7 6 Plus, iPhone 5/5C/5S/SE amin'ny hafainganam-pandeha voalohany (5V/1A).
Safe & azo itokisana: Ny charger tselatra 20W dia manana rafitra fiarovana marobe izay miantoka fiarovana tanteraka ho an'ny fitaovanao tselatra.Ny cargador voamarina amin'ny ETL ho fiarovana amin'ny overvoltage naorina, dia manana voltora maharitra.ny tselatra tariby naorina-in smart chip hifanaraka amin'ny ankehitriny takian'ny fitaovana ho azy.
MFi Certified USB C amin'ny Lightning Cable: Azonao atao ny mampifandray mivantana ny MacBook/Pro amin'ny iPhone/iPad ary mankafy ny hafainganam-pandehan'ny data 480 Mbps.Ny Apple MFi Certification dia miantoka 100% mifanaraka tsara amin'ny fitaovana Apple, tsy misy hafatra fampitandremana intsony.Ity tariby iphone 6FT ity dia mandalo fitsapana miondrika 18,000, maharitra ary maharitra.
Fanaterana mahery vaika 20W:
Fast Charging dia mahatonga ny iPhone 12/12mini/12 Pro/12 Pro Max/11/11 Pro/11 Pro Max/Xs Max/XS/XR/X/8/8 Plus hatramin'ny 50% hery ao anatin'ny 30 minitra.
Ampitomboy ny herin'ny 1% isa-minitra ka hatramin'ny 80%, ary avy eo dia midira ny fomba fiampangana mahazatra.
IMPUT: 100-240V 0.5A 50/60Hz
OUTPUT: 5V=3A / 9V=2.2A / 12V=1.5A
Miaraka amin'ny fanaterana herinaratra 20W, ity charger Type C ity dia manohana Fast Charge mba hamenoana ny andiany iPhone 12 anao amin'ny 0-60% ao anatin'ny 30 minitra fotsiny ary fitaovana hafa mifanentana amin'ny USB-C amin'ny hafainganam-pandeha tsara indrindra, ka afaka manome hery betsaka araka izay ilain'ny findainao. .
3x Haingana kokoa
Syncwire USB-C Wall Charger dia natao manokana ho an'ny andiany iPhone 12.Ny heriny 20W dia hanome ny iPhone 12 anao ny fiampangana haingana indrindra, izay in-3 haingana kokoa noho ny amin'ny charger 5W mahazatra.
* Mila tariby USB-C amin'ny tselatra ho an'ny fitaovana Apple ianao.
Compact Mini habeny
Ity charger compact ity dia mipetraka mipetaka amin'ny rindrina mba hifanaraka mora foana ao ambadiky ny fanaka na amin'ny fivoahana sarotra tratrarina.Izy io koa dia mirefy tsara mba hapetraka ao anaty paosy na kitapo, izay midika fa afaka mahazo fiampangana haingana ianao na aiza na aiza alehanao.
Ny rafitra fiarovana amin'ny fiarovana maro sy ny fanamarinana PSE-UL-FCC-CE dia miantoka fiarovana tanteraka ho anao sy ny fitaovanao.Izy io dia mamantatra ho azy ary manome charging tsara indrindra ho an'ny fitaovana mifandray mba hiantohana ny traikefa famandrihana haingana indrindra, azo antoka ary mahomby indrindra.
Ny fitaovana USB-C rehetra latsaky ny 20W (fanavaozana)
iPhone 12/12 mini/12 Pro/12 Pro Max/iPhone SE(taranaka faha-2)/11/11 Pro/11 Pro Max/XS/XS Max/XR/X/8 Plus/8;
iPad Pro 12.9-mirefy 4/3/2/1;iPad Pro 11 inch 2/1;iPad Pro 10.5 santimetatra
AirPods;Apple Watch;Switch;Earbuds Wireless sy ny maro hafa.
USB-C tselatra Cable na USB-C ho USB-C tariby tsy tafiditra.(Cable amidy mitokana)
Tsy manefa ny Switch amin'ny hafainganam-pandeha feno.
Noho ny fepetra fiarovana amin'ny bateria lithium, ny hafainganam-pandehan'ny telefaona dia ho haingana kokoa amin'ny 0% ka hatramin'ny 50% ny fahafahan'ny 50% ka hatramin'ny 100%.
Mifanaraka amin'ny finday Android sy iOS rehetra
teo aloha: HDMI to VGA converter misy feo 3.5mm
Manaraka: 120w Gallium Nitride adaptatera misy plug maromaro (ho an'ny rindrina & birao)